I-PUBG Lite Hacks 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
PUBG BHALA IMINYAKA
Akukho nto "lite" malunga noku kugenca! Nge-PUBG Lite ESP yethu, iAimbot, iWall Hack, kunye noNgabuyi, akukho mntu kuwo nawuphi na umdlalo oza kuba nakho ukumisa ulawulo lwakho oluphezulu.
Sele uyithengile iPUBG Lite kugula? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge ii-PUBG Lite hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, nto leyo ethetha ukuba unokuzisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu I-PUBG Lite Hacks
PUBG Lite Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks kunye nokunye
Iphupha lomnqweno yimfumba
Thenga I-PUBG Lite IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ofuna ukuwuthenga uthenge kuwo kwaye uwafumane ngokulula.
Sinee-PUBG Lite hacks ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, zonke ezi ziya kukunceda uphumelele.
Inkqubo yethu yokuhlawula ekhethekileyo iya kuzisingatha zonke iintlawulo zakho ngokukhuselekileyo!
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela iiPUBG Lite Hacks!
Nje ukuba unikwe ukufikelela kwimveliso yesitshixo sakho unokukhuphela iPUBG Lite hack
Kutheni usebenzisa i-Gamepron PUBG Lite Hacks?
Nangona i-PUBG ingumdlalo wokuqala wedabi wonke umntu awuthandayo, abazalwana babo abahambahambayo basengumchasi onamandla. Uninzi lwabadlali bebhola abahambahambayo kwezi ntsuku kwaye lenze isidingo esithile semidlalo yeselfowuni, yiyo loo nto iPUBG Lite iye yathandwa njengomsunguli wayo, kwaye abanye abantu bade bathi iPUBG Lite yinguqulelo ebhetele kakhulu. Ngelixa "ikhonsoli" yeselfowuni (ethetha ukuba izixhobo zakho ze-smart) iya isiba ngcono, ayinakho ukubonelela ngohlobo olufanayo lwemizobo onokuyifumana kwikhompyuter. Ngale nto ithethwayo, usengumdlalo omangalisayo kwaye kukho isizathu sokuba abantu abaninzi banomdla kwi-PUBG Lite cheats-ngekhe uyazi okwangoku, kodwa baninzi abantu abakhohlisayo kunye nabadlali abanezakhono ukujongana nabo.
Ukuya kumdlalo wePUBG Lite ngaphandle kolunye uhlobo lwe-PUBG Lite Hack enikwe amandla sisigwebo sentambo kuba abantu abaninzi baqhuba imidlalo kwiikhompyuter zabo kwaye basebenzise ukukopela kuncedo lwabo. Ungaze ufune ukungena phakathi kwePUBG hacker kunye nokuphumelela kwabo, uninzi esinokukuxelela lona! Ukuba awuzange uve amandla ahambelana nomgangatho ophezulu wePUBG Lite Hack, i-Gamepron inokunyanga okukhethekileyo kuwe. Akunyanzelekanga ukuba ube ngumkhohlisi onamava ukuze usebenzise i-PUBG Lite hack, njengoko senze inkqubo yokufaka ibe yinto elula!
Sinikezela ngenkxaso yabathengi be-stellar kwaye oko kuya kuba luncedo olukhulu ukuba uzifumene nakweyiphi na ingxaki, nokuba yingxaki ngokuqhekeka uqobo okanye imibuzo nje ngokubanzi. Abaphuhlisi abaninzi bokuqhekeza baya kuyijonga imeko yenkxaso yabathengi kwinkonzo yabo, yiyo loo nto ungasokuze ufumane mpendulo- sinika ingxoxo ebukhoma kunye nezinye iindlela zenkxaso yabathengi ukuze ugcine ukukopela kunye nokuphumelela imidlalo ngokungaguquguqukiyo ngangokunokwenzeka.
Inani leempawu ezifumaneka ngaphakathi kwe-PUBG hack yethu ziya kukunceda unganeli nje ukukhula njengomdlali wePUBG Lite kodwa njengomdlali weqonga ngokubanzi ngokunjalo. Xa uqaphela ukuba ungazisebenzisa ngokufanelekileyo izinto ezithandwayo yiPUBG Lite ESP, iWall Hack, kunye neAimbot ukuphumelela yonke imidlalo oyidlalayo, ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba uqale uthenge izitshixo zemveliso yeminye imidlalo oyithandayo!
IPUBG Lite Wall Hack (ESP)
Ulwazi lwePUBG Lite Player ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
I-PUBG Lite Item ESP eneefilitha
IPUBG Lite Aimbot
PUBG Lite isilumkiso sotshaba
I-PUBG Lite yokutsiba okungaphezulu (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo).
PUBG Lite ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
I-PUBG Lite yokubuyisa umbuyekezo
Ngokufanelekileyo I-PUBG Lite yimfumba Iimbonakalo
Sebenzisa i-PUBG Lite Player ESP ukuchonga indawo yeentshaba, nokuba zikhona ngasemva komgangatho oqinileyo / opaque
Ungasebenzisa i-ESP Hack ukuchonga abadlali ngamagama abo, ukuba bashiye impilo engakanani, kunye nomgama wabo!
Sebenzisa izinto zethu zokucoca zePUBG Lite ESP ukubona ukuba loluphi uhlobo lwezinto ezikulindeleyo ngaphakathi kwezakhiwo!
Ngokuqinisekileyo eyethu eyona nto ithandwayo yi-PUBG Lite hack iya kuba yeyethu ekhethekileyo yePUBG Lite Aimbot, efumaneka apha kwiGamepron. Iimbumbulu zakho ziya kuhlala zikumhlaba xa usebenzisa ukukopela kwethu!
Umkhondo wePUBG Lite Bullet (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Landa umkhondo weebhulethi zakho kwaye ubone ukuba zihla phi ukusuka kumgama omfutshane ukuya phakathi usebenzisa iPUBG Lite Hack yethu! Ungayisebenzisa ekuchongeni indawo zotshaba kwaye ubone ukuba kude kangakanani ukubulala kwakho.
Kuya kufuneka ugcine intloko yakho kwi-swivel, yiyo loo nto isilumkiso silungile. Umyalezo uza kubonisa xa iintshaba zisondele kufutshane okanye zijolise kuwe!
I-PUBG Lite yokutsiba okungaphezulu (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Indlela yethu yokutsiba okuPhezulu iya kukugcina uphila kweyona nto ingacingekiyo, ngenxa yoko akuyomfuneko ukuba ukhathazeke ngokonakala kwesiphumo xa usebenzisa iPUBG Lite Hack yethu.
PUBG Lite ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
I-PUBG Lite aimbot yethu ixhotyiswe ngokuthandwa kwe-Bone Prioritization kunye nolunye useto olulungelelanisiweyo, ekuvumela ukuba wenze ngokobuqu amava akho ePUBG Lite.
I-PUBG Lite aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Ukutshekishwa okubonakalayo kufanelekile kubasebenzisi be-PUBG Lite Aimbot, kwaye bakho apha ngaphakathi kwe-PUBG Lite yeHack! Ukutshekishwa okubonakalayo kuqinisekisa ukubulala impepho.
Ukuphinda ubuye kuya kukubulala ngaxa lithile, kwaye inokwenzeka loo nto xa uza kuthatha isigqibo sokufikelela kwi-PUBG Lite Hack kwaye iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde
Yiba ngowona mdlali ubalaseleyo wePUBG Lite Player
Ubomi abulunganga kwaye sonke siyabazi, yiyo loo nto ukusebenzisa iPUBG Lite Hacks ukuya phambili akukubi kakhulu! Ukhe wahluthwa uloyiso okanye ezimbini ngabagculeli ngaphambili, kwaye ithi "iliso ngeliso" ithi qatha engqondweni. Ngawo onke amanqaku akhethekileyo kunye nokhuseleko olubandakanyiweyo kwi-PUBG Lite Hack yethu, kuya kuba nzima ukudlulisa eli thuba!
I-PUBG Lite Hacks edumileyo kunye nokukhohlisa
IPUBG Lite ESP kunye neWallhack
Ezinye iiPUBG Lite Hacks kunye nokukhohlisa
I-Gamepron inikezela ezona ndawo zidumileyo zePUBG Lite Hacks kunye nokukhohlisa okufumaneka kwi-intanethi, kwaye ukuba awusikholelwa, zizizamele! Umahluko ubonakala kwangoko, kuba awusebenzisi nescreen esixineneyo ngenxa yomgangatho osezantsi wePUBG Lite Wall Hack. Senze yonke into efunekayo ukuqinisekisa ukuba izixhobo zethu zezona mgangatho uphezulu, kwaye saye saphanda ezinye iiPUBG Lite Hacks ukwenza izinto zilunge.
Ungaqwalasela iPUBG Lite yethu yokuqhekeza udibaniso olugqwesileyo lwazo zonke izixhobo zakho ozithandayo, ezisongelwe ndinye. Awusenathemba lokuba uza kufumana abadlali beqela abalungileyo okanye indawo elungileyo yokuphembelela ukuba ungumdlali weSolo kuba iPUBG Lite hack yethu iya kukuvumela ukuba uwuphumelele umdlalo nokuba ungakanani. Nokuba ufuna ukuphatha iqela okanye ube yingcuka yodwa, yethu iPUBG Lite Hack iya kukuvumela ukuba wenziwe lula umsebenzi. Akukho sidingo sokulwa nobuchwephesha bomdlalo kunye neminwe etyebileyo xa ukukopela kwethu kulapha ukukunceda!
I-PUBG Lite Aimbot ithathe yonke into abantu abayithandayo kwizixhobo zethu zoqobo kwaye bayiguqulela kwinguqulelo yeselfowuni. Usenakho ukufikelela kuzo zonke izinto ezintle ezinxulunyaniswa nePUBG Aimbot yethu yoqobo, enje ngokuBekwa phambili kweThambo kunye nokuZenzekelayo kweNjongo / yoMlilo kunye nezinye izinto eziluncedo! Unokwenza ngokwezifiso amava akho ePUBG Lite Aimbot ngesixhobo sethu, kwaye yeyona nto ibonwa ngabasebenzisi abaninzi- awuphelelanga ekubeni nayo yonke into isebenze ngaxeshanye, kufuneka ukhethe kwaye ukhethe!
Ukuchaneka kwakho kuya kuchonga isiphumo somdlalo wonke, ayinamsebenzi nokuba ilunge kangakanani imipu kunye nezixhobo zakho! Ukuba awukwazi ukubeka umhlaba kwisangqa sokugqibela izinto ziya kunamathela (kwaye zikhawuleze!), Kungenxa yoko le nto sisebenzisa iPUBG Lite Aimbot yethu ukuqinisekisa ukuba umhlaba wokudubula ubalulekile kwimpumelelo yakho.
Ngaba wakhe wabulawa ngumntu othile eludongeni okanye kwikona kwaye wazibuza ukuba bazi njani ukuba ulapho? Amathuba okuba babe ne-PUBG Lite ESP kunye neWall Hack enikwe amandla, ebanika amandla okubona iintshaba kwiindawo eziqinileyo / eziqaqambileyo. Ngelixa uninzi lwabanye ababoneleli behack baya kukukhawulela xa kuziwa kwiimpawu, unokujonga iintlobo ezahlukeneyo ze-ESP apha kwiGamepron. Nokuba ufuna ukubona ukuba lutshaba lushiye impilo engakanani, umgama wabo, okanye nokuba sesiphi isixhobo abasisebenzisayo, iPUBG Lite ESP kunye nePUBG Lite Wall Hack zikunika ithuba lokuyenza.
I-Wall Hacks inokukunceda ukuba ulungiselele ama-ambush amaqela eentshaba, okanye wenze nje ii-callout zabalingane bakho. Nokuba ucwangcisa ukwenza ntoni nge-PUBG Lite ESP kunye neWall Hack, yazi nje iGamepron ngoyena mnikezeli wayo yonke into oyifunayo. IWallbang kunye ne-pop ejikeleze iikona ngokudubula ngokuzithemba xa iPUBG Lite Wall Hack yethu yenziwe!
Ukugcina umkhondo wotshaba lwakho kulula ngokwaneleyo kunye ne-PUBG Lite ESP kunye neWall Hack, kodwa sithatha izinto ngokukuvumela ukuba ubone iinyawo zabo ngaphezulu koko. Ungazibamba iintshaba zakho njengexhoba ngokugcina umkhondo weenyawo zazo, emva koko uzikhuphe nenqaku loMonakalo oMkhulu! Nokuba ziphi na izixhobo ozisebenzisayo, ungavula inqaku loMonakalo oPhezulu kwaye wenze iintlungu ngakumbi kubachasi bakho ngembumbulu nganye. Ayithathi isazinzulu se-rocket ukuqonda ukuba kutheni zombini i-Footprints kunye ne-High Damage features ziya kuba luncedo, kodwa zikwimpawu ongazukufumana ngokwesiqhelo kwi-PUBG Lite Hack. Ngombulelo, sithanda ukwenza izinto ngokwahlukileyo apha kwiGamepron!
Inqanaba lomgama lilungele xa ubona utshaba, kodwa awuqinisekanga ukuba bakude kangakanani. Kukho amathuba apho ucinga ukuba kunokuba kukuhamba ngokufanelekileyo ukuya, kodwa indawo yethu ekumgama iya kunceda ukwenza izinto zibonakale ngakumbi.
Sinikezela ngeempawu ezahlukeneyo ngaphakathi kwePUBG Lite Hack yethu, zonke ezazenzelwe ngokukodwa abasebenzisi apha kwiGamepron. Sifumanise ukuba zeziphi ezona zinto zidume kakhulu kuzo zonke iihacks zethu ezazikhutshiwe ngaphambili kwaye sakhetha ukuzibandakanya ngaphakathi kwi-PUBG Lite Hack yethu, kunye nokubandakanya ezimbalwa ezitsha! Sinikezela ngeNqaku lokuSusa elinokukunceda ulahle izinto ezicaphukisayo ezibandakanyiweyo kumdlalo, ukubuyela umva kunye nokusasazeka kwebhulethi-sikwavumela ukuba ulahle ezinye izinto ezinjengeenkungu nomsi.
Iimpawu ezichasene nokukopela ezibandakanyiweyo kwi-PUBG Lite Hack yethu ziyamangalisa, ukutsho nje okuncinci; awunakukhathazeka ngeakhawunti evaliweyo okanye ezinye iziphumo xa ukopela ngeGamepron. Ukugcina iakhawunti yakho ikhuselekile ngexesha lenkqubo yokubamba kubalulekile kuthi, yiyo loo nto sinikezela nge-100% ingafumaneki
I-PUBG Lite imibuzo
Kutheni le yethu iPUBG Lite Hacks
Ayinakuthelekiswa nanto xa isiza kumgangatho, zonke iiPUBG Lite Hacks zethu zenzelwe ukuba zigcine uphumelela nokuba ungathini. Ayinamsebenzi ukuba bangaphi abadlali abanezakhono ohlangane nazo, iPUBG Lite Hack yethu iya kubakhupha ngaphandle kwayo! Sinika abafikayo kunye nabadlala umdlalo ongcungcuthekileyo ithuba lokuchuma, kwaye banokude baqhube kancinci.
Kutheni iPUBG Lite Aimbot yethu
Uninzi lweenketho zePUBG Lite Aimbot ziya kuza ngeempawu ezahlukeneyo, kuba ayinguye wonke umntu onokuphila ngokwemigangatho esinayo apha kwiGamepron. I-PUBG Lite Aimbot yethu ibalasele kuba sigxile kumgangatho weempawu, ngokuchasene nobungakanani ngezixhobo zethu; Kwaye ayonzakalisi into yokuba awusoze uphoswe yenye into!
Kutheni iPUBG Lite ESP yethu
Usebenzisa i-PUBG Lite ESP yethu kufana nokuzinika umnqweno, njengoko uza kubona iintshaba zivela ngapha nangapha. Nokuba abo bamise iintente kwizakhiwo kufuneka babe nexhala ngengqumbo yakho, kuba ukusebenzisa kwethu iPUBG Lite ESP kuyakubhengeza ibha yabo yezempilo kunye nezixhobo ukukwazisa ukuba izakuba lidabi kwangaphambi koko.
Kutheni iPUBG Lite Wallhack yethu
I-stellar PUBG Lite Wallhack iya kukunika ithuba kuyo yonke imipu, nokuba unayo umpu osisiseko oza kusebenza nawo. Uza kubona intshaba kwiindawo eziqinileyo kunye ne-opaque, ekuvumela ukuba uphephe ukulala kunye nokubulala iinkampu ngokuthanda-kulungile ukuba uvumele abo badlala nabo bazi malunga nosongelo olunokubakho!
Kutheni iPUBG Lite Norecoil yethu
Ukuphinda ubuye kunokuba buhlungu, ukutsho okuncinci-yiyo loo nto bonke abasebenzisi bethu beza kuthontelana ukuya kwicandelo lethu lePUBG Lite NoRecoil. Xa kungafuneki ukhathazeke ngokubuyela umva unokuzitshisa izixhobo ngaphandle kwenkathalo emhlabeni, kuba ngokuzenzekelayo uya kuba yimfumba echanekileyo kunaleyo uyichasayo.
Ungazikhuphela njani ezona hacks zilungileyo zePUBG Lite?
I-Gamepron yenza inkqubo yokukhuphela ibe lula kakhulu, njengoko konke okufuneka ukwenze kukuthenga ukufikelela kwelinye lamaqhosha emveliso ekhethekileyo kwaye unokukhuphela iPUBG Lite Hack yakho kwangoko emva koko. Akukho sidingo sokuba ngumkhangeli onamava ngeGamepron, njengoko siza kulungiselela wonke umntu okudlala.
Kutheni le nto iPUBG Lite hacks ibiza kakhulu kunezinye
IPUBG Lite Hack yethu inokubonakala inexabiso elincinci xa ithelekiswa nabanye, kodwa eso sisizathu esivakalayo. Sinikezela kuphela ii-hacks zethu ngokulinganiselweyo, oko kuthetha ukuba linani elithile kuphela labasebenzisi eliza kukwazi ukufikelela kwii-hacks zethu ngalo naliphi na ixesha. Ngenxa yoko, iPUBG Lite Hacks zethu zibiza kakhulu kunokuba zifunyenwe kumboneleli wakho ophakathi.
Siyakholelwa ekunikezeleni ngamava omsebenzisi aguquguqukayo, yiyo loo nto sinikezela ngezitshixo zemveliso yethu kwimida embalwa eyahlukeneyo. Unokukhetha ukuthenga izitshixo zemveliso yakho yemihla ngemihla, ngeveki, kunye nokusetyenziswa kwenyanga. Emva kokuba ixesha liphelile, uya kucelwa ukuba uthenge ukufikelela kwiqhosha lemveliso kwakhona.
Kuhle I-PUBG Lite yimfumba Iimbonakalo